ဒ ဏ် ရာရ ထား -ဆောင်းဦးလှို င် ၊ဇော် ဝ င်းထွ ဋ် #38077 | Featuring
Home › Music › ဒ ဏ် ရာရ ထား -ဆောင်းဦးလှို င် ၊ဇော် ဝ င်းထွ ဋ်
ဒ ဏ် ရာရ ထား -ဆောင်းဦးလှို င် ၊ဇော် ဝ င်းထွ ဋ်
Published at February 02, 2014
by Ko Kyaw OoDuration: 02:25
Downloading ဒ ဏ် ရာရ ထား -ဆောင်းဦးလှို င် ၊ဇော် ဝ င်းထွ ဋ် mp3 on this site is just for review purpose. If you love the song, please support the artists by buying the original CD/Cassette or buying the song from iTunes.
ေ ဝ ဒ နာခ ရီးအ စ ပြုတော့ ဘ ယ် ကိုရောက် မ ယ် မ သိ လ ည်းသွား မ ယ် အ သ ည်းကွဲ ခဲ့ ပြီ မ င်းေ လးနဲ့ အ ဆ င် မပြေ ဘူးရ င် ခု န် ခြ င်းတိုးတိ တ် ဖို့ ငါ ဟာမိုးသား ကြီးကိုငေးေ ငးကြ ည့် ကာဒီ အ ချိ န်ဝေ ဒ နာရ ထား ကြီးခ ရီးစအေးစ က် တဲ့ ညလေ ဆ န် ရ င်းသွား မ ယ်ငွေရောင် လ လို ငါ တ စ်ယောက် ထဲ တ ဖြ ည်းဖြ ည်းနဲ့ မို င်တွေကျော် ပြီးချ စ် သ ည်းဦးနဲ့ က မ္ဘာခြားဝေးဆီ ယုံ ကြ ည်နေ တာေ တွ ဒီ က မ္ဘာမှာပြို ကျတော့ ရ င် ထဲ ထိ ချ က် က ပြ င်းလွ န်းမှ န် မ ယ် ထ င် တာေ တွ ဒီ အ ချိ န် မှာအ ကု န် မှားတော့ ငါ့ အ သ ည်းလ ည်းအ လွ မ်းဒ ဏ် ရာေ တွ ပို
Watch video on Youtube: ဒ ဏ် ရာရ ထား -ဆောင်းဦးလှို င် ၊ဇော် ဝ င်းထွ ဋ်
Search another results: ဒ ဏ် ရာရ ထား -ဆောင်းဦးလှို င် ၊ဇော် ဝ င်းထွ ဋ်
Post related to ဒ ဏ် ရာရ ထား -ဆောင်းဦးလှို င် ၊ဇော် ဝ င်းထွ ဋ်:
[04:22] အ ချ စ် တဲ့ လား - မ င်းချ စ် သူ ၊ဇော် ဝ င်းထွ ဋ်By Ko Kyaw Ooမူ ရ င်းသီ ချ င်း၊ Is That The Thanks ...
[04:37] စီးက ရ က် မီးခိုးများ - သု ခ မိ န် လှို င် ၊ဇော် ဝ င်းထွ ဋ်By Ko Kyaw Ooစီးက ရ က် မီးခိုးများ - � ...
[02:34] အ ချ စ် များ သူ့ ဆီ မှာ-စောခူ ဆဲ လ် ၊ဇော် ဝ င်းထွ ဋ်By Ko Kyaw Ooအ ချ စ် များ သူ့ ဆီ မှာ-စေ ...
[02:50]ဝေ ဒ နာလူ - သု ခ မိ န် လှို င် ၊ ပလေးဘွို င် သ န်းနို င်By Ko Kyaw Ooေ ဝ ဒ နာလူ - သု ခ မိ န် လှို င် ...
[04:30] ဆ ယ် လ် မွ န် ငါးတို့ အ ပြ န် - ခ င် ဝ မ်းBy Ko Kyaw Ooဆ ယ် လ် မွ န် ငါးတို့ အ ပြ န ...